အင်းချွန်းမြို့ ကို တရားဝင်အမည်အားဖြင့် အင်ချွန်းမီသရိုပိုလစ်တန်မြို့သည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အနောက်မြောက်အရပ်တွင် တည်ရှိပြီး အရှေ့ဘက်ရှိ ဆိုးလ်မြို့နှင့် ဂျောင်ဂီးမြို့တို့နှင့် ထိစပ်နေသည်။ နီယိုလက်သစ်ခေတ်ကတည်းကပင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သော ဒေသဖြစ်ပြီး ၁၈၈၃ ခုနှစ် နိုင်ငံတကာဆိပ်ကမ်းဖြစ်လာချိန်တွင် အင်ချွန်းသည် လူဦးရေ ၄,၇၀၀ တို့နေထိုင်ရာ မြို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် မြို့၌ လူဦးရေ ၃ မီလီယံခန့်အထိ နေထိုင်လျက်ရှိပြီး ဆိုးလ်နှင့် ဘူဆန်တို့ပြီးလျှင် တောင်ကိုရီးယား၏ တတိယမြောက် လူဦးရေ အထူထပ်ဆုံးမြို့ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သဘာဝ၏ အားသာချက်ဖြစ်သော ကမ်းခြေမြို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဆိပ်ကမ်း၏ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အ ...
ကော့ပငန်း သည် ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ ဆူရတ်ဌာနီခရိုင်၊ ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့တွင်ရှိသော ကျွန်းတခုဖြစ်သည်။ ကော့ပငန်းကျွန်းရှိ ဟာ့ဒင်းကမ်းခြေတွင် လပြည့်ညတိုင်း ကျင်းပသည့် လပြည့်ပါတီကြောင့် လူသိများသည်။ ၎င်းကျွန်း၏ ညီအမ ကျွန်းနှစ်ခုမှာ တောင်ဘက်ရှိ ကော့စမွီကျွန်းနှင့် မြောက်ဘက်ရှိ ကော့တောင်ကျွန်းငယ်ကလေးတို့ဖြစ်သည်။ အဓိကမြို့ ထောင်ဆလာ ကော့စမွီကျွန်းမှ ၁၅ ကီလိုမီတာခန့်ကွာဝေး ကုန်းမြေမကြီးမှ ၅၅ကီလိုမီတာခန့်ကွာဝေး ခန့်မှန်းအကျယ်အဝန်း ၄၀ ကီလိုမီတာ ပျမ်းမျှလမ်းလျှောက်ချိန် ခန့်မှန်းချေ ၁၀နာရီခန့် အမြင့်ဆုံးတောင်: ခေါင်လ၊ ၆၃၀မီတာ ကော့တောင်ကျွန်းမှ ၃၅ကီလိုမီတာခန့်
မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိသည့်အချိန်တွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နှင့် ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ရေကြောင်းနှင့် မြို့ပြလေကြောင်းဝန်ကြီးဌာန ၊သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စာတိုက် နှင့် ကြေးနန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟူ၍ ဝန်ကြီးဌာန ၂ခု ခွဲ၍ ဖွဲ့စည်း ခဲ့သည်။၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် ၎င်းဝန်ကြီးဌာန ၂ ခုကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲ၍ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။၁၉၇၂ ခုနှစ် မတ်လတွင် ၎င်းဝန်ကြီးဌာနကို ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟု ပြင်ဆင်၍ လုပ်ငန်းဌာနပေါင်း၁၇ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်းသည် တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကျောင်းကို ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ဆင်မလိုက်သင်္ဘောကျင်း နေရာ၌ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။၁၉၇၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့၌" ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း” အမည်ဖြင့် မိတ္ထီလာမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ထိုအချိန်က မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာသင်တန်းများ ၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်း များ ၊ အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်းများကို လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးခဲ့သည်။၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၂၉ရက်နေ့တွင် ယခင် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေး စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန ၊ ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန ဟူ၍ ဝန်ကြီးဌာန၃ ခု အဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ကျောင်းသည် ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။သို့ဖြစ်ပါ၍ ၂၉. ၁. ၁၉၉၂ ရက်နေ့မှစ၍ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများ မပါဝင်တော့ဘဲ မော်တော် ယာဉ်ဆိုင်ရာ ၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်းများ နှင့် အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းများ ကိုသာ ပို့ချခဲ့သည်။၂၀၀၆ ခုနှစ် မှစ၍ ဂဟေအခြေခံ နှင့် စက်ဆင်အခြေခံသင်တန်းတို့ကို မြန်မာ့မီးရထား၊ဒီဇယ် စက်ခေါင်းစက်ရုံ ရွာထောင်ရှိ Rail Transportations Training Center RTTC ကျောင်း၌ ပြောင်းရွှေ့တက်ရောက်ခဲ့ကြသည့်အတွက် ကျောင်းတွင် စက်ဆင်အခြေခံ သင်တန်းကို မဖွင့်လှစ်တော့ဘဲ လျှပ်စစ်အခြေခံသင်တန်းတစ်မျိုးတည်းကိုသာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။၁၉-၆-၂၀၁၅ ရက်နေ့ ဒုတိယဝန်ကြီး ရထား ကျောင်းသို့လာရောက်စဉ် ရထားဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေးသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ရန် လမ်းညွှန်မှုပြုခဲ့ပါသဖြင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ သင်ကြား လေ့ကျင့်ရေးနှစ်တွင် ရထားဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးသင်တန်း၃မျိုးဖွင့်လှစ် ပို့ချပေးနိုင်ခဲ့သည်။၃၀. ၃. ၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့အား ပေါင်းစည်း၍ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သဖြင့် ‌ကျောင်းသည် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ လက်အောက်ခံ ဌာန ၊လုပ်ငန်း ၁၈ ခု အနက် ၁ ခုအပါအဝင် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။လက်ရှိအခြေအနေတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာသင်တန်းများ ၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်းများ ၊ ရထားဆိုင်ရာသင်တန်းများ ၊ မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာသင်တန်းများ ၊ စက်မှုလက်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေး လျက်ရှိသည်။